Raha seza sy vola no hitolomana, aleo mijanona any an-trano, tsy mety amin’ny olona tia tanindrazana izany ! – MyDago.com aime Madagascar
Raha seza sy vola no hitolomana, aleo mijanona any an-trano, tsy mety amin’ny olona tia tanindrazana izany !	Magro 14 Martsa 2011
Nitohy toy ny mahazatra ny tolona teto amin’ny kianjan’ny Magro, i Ramy solontenan’ny tanora dia nanambara fa tsy i Andry Rajoelina na Raharinaivo na i Yves Aimé no tena fahavalo fa ny Frantsay izay manambitamby ny olona tsy mijoro tsara. Izany no mbola tsy hahafahan’i filoha Ravalomanana mody satria izy dia tsy hamela an’i Madagasikara ho fehezan’ny Frantsay. Ny adinon’ ireny olona lasa ireny dia voafidy tamin’ny anaran’ny TIM izy ireo ary noho ny fitiavanan’ny olona an’i Dada no nahalany azy, ary raha hilatsaka ho fidiana izy ireo amin’ny fifidianana ho avy dia aza manantena ny ho lany hoy i Ramy.
Ingahy Ignace, solontenan’i Moramanga indray dia nilaza fa tsy namadika palitao ireny tao anaty ankolafy Ravalomanana nivadika ireny fa lasa foza, tsy mandroso fa mihemotra ny diany hoy i Ignace. Tsy manana lalam-panorenana mazava I Dago matoa mila “convention politika” fa aza fitahana ny vahoaka hoy izy mantso ny FAT.
I Rostand indray kosa dia nampiaka-peo fa tsy idiran’ny olona tsy mino ny tany Kanana. Mba mivavaha ho azy ireo mba hiverin-dalana fa lalana diso no alehany. Miasa milamina nefa tsy tara ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa raha ny tsy rariny kosa no tohanan’ireo hery vahiny dia tsy mety hoy izy.
Hentitra I Manoela namely an’ireo namany nisintaka, hajao ny teniny raha zanany ianareo hoy izy.Nanome vaovao ny mpitolona ihany koa izy fa hanomboaka hitety ny firenena Afrikana mpikambana ao amin’ny SADC ny filoha Ravalomanana manomboaka androany.
Ny solombavambahoaka Benjamin Ramamonjisoa dia nilaza ny lalana efa niarahan’izy sy ny filoha, ahoana moa no handehanako any am-pita any nefa dia niara niasa amin’ny filoha Ravalomanana 16 taona aho ary roa taona aho nitolona satry adidiko izany ? Marina ilay fiteny hoe « la politique c’est l’art de mentir ». Madaitra tokoa io ankehitriny, raha te hiova lasy aho tsy aleo ve tamin’ny andron’i Raharinaivo izay efa fantatro tamin’ny taona 1977 ? hoy izy. Raha mbola seza sy vola no hitolomana, aleo mijanona any an-trano, tsy mety amin’ny olona tia tanindrazana izany.
Samy nanentana ny mpitolona hoavy maro be moa ny mpandaha-teny rehetra tamin’ity androany ity teny amin’ny kianjan’ny finoana.
Jereo eto ny sary Magro 14 martsa 2011, mihisa 15.
Ny vola ihany, ny vola foana no mahafatifaty azy ireo ! « Tsy misy Vidin’aina hanambazana seza » « Mivarotra Tanindrazana ny FAT » Auteur Solo RazafyPublié le 14 mars 201114 mars 2011Catégories Magro, Malagasy, Négos, Politique	4 pensées sur “Raha seza sy vola no hitolomana, aleo mijanona any an-trano, tsy mety amin’ny olona tia tanindrazana izany !”	Ziry Onésime dit :	14 mars 2011 à 21 h 51 min	Mihevitra ny ahazo an’iza ao amin’ny Mouvance RAVALOMANANA moa ireny lasa foza orana ireny?… Raha mandinika ianareo dia jereo tsara fa na ireo fotsy bobo (Mémé, Vyvato), na ireo manao tarehan’i satana (Rasomotra, Raharinaivo), na ireo mpihatsara ivelantsihy (Hery RAKELISAINA) no tena lasa any!
Sao mihevitra izy ireo fa hisy hanaraka azy!… Ary inona moa no eritreretiny ho azo? PM, sa ministera, sa inona?… Tadidio Tompoko fa tsy maintsy milelaka ny ravin-daisoan’i Mpanjakan’ny Jiolahimboto Andry RADOMELINA ianareo vao tafiditra ao, sy mahazo seza!…. Dia tena lasa ambany dia ambany ny fisainana e!
Ziry Onésime dit :	14 mars 2011 à 21 h 54 min	Dia ahazo inona anefa hono ireo mpamadika palitao irao?…. Ho lasa PM sa Ministra?… tadidio Tompoko fa tsy maintsy misy sedra atao amin’ny fisolelahana an’i Andry RADOMELINA (milelaka izay tokony ho lelafina e!) vao tafiditra ao!… Dia tena lasa ambany dia ambany ny fisainana e!
KintanaMananDrambo dit :	15 mars 2011 à 10 h 11 min	Tsy foza orana no hiantsoina an’ireo ry Ziry Onésime fa holothurie, na concombres de mer ! Pata… inona moa, hoy ny malagasy ?
Omaly izy ireo, dia mbola tsy nitsahatra niantso sy nitarika ny Tena legalista, hoe hiarak’amin-dry zareo ! Manantena fa mbola misy mpamadika any ho any !
Milahatra miaraka amin’ny foza ny patatay ! Amin’izay hono dia afaka mihiditra amin’ny varavarambe, fa tsy avy any am-baravarankely na ny tafo.
Tsy fantany akory fa io varavarambe io dia tsy hisokatra, satria mbola mihidy amin’ny griazy vy be ! Ny lakile amin’izany mbola any amin’i dada !
Rehefa tsy tafiditra ao anatin’ilay trano be, dia hiaraka amin’ny foza ao anatin’ilay trano kely angamba, hiaritra ny fofona ao !
KintanaMananDrambo dit :	15 mars 2011 à 10 h 16 min	Tohizo ny tolona r’Ingahy Rabenja ô ! Aza manao toy ny nataon’ilay iraika lahy lasa any Zenevy iny ! Efa mitorina ny lohan’ireny ; sady midahoahoa koa no tsy manana hazon-damosina !
Précédent Article précédent : Photos + Antso President Ravalomanana teny amin’ny Magro 14/03/2011Suivant Article suivant : Video – Interview Mamy Rakotoarivelo 14/03/2011
Les meilleurs Articles	Mme Voahirana anabavin’i Andry Rajoelina no mpanondrana Bois de Rose	Mitady ny very ny Malagasy !	MITANTARA NY HABIBIANA NATAON-DRY LYLSON TANY ATSIMO I D'GARY	MyDago.com aime Madagascar